समाचार - तौलिया रमाईलो
जीवनमा केहि साना खुशीहरू छन् जुन बदल्न सकिदैन। बिहानको कफीको गन्ध। वसन्तको दिनमा, तपाईंको घरको सबै विन्डोज खोल्नुहोस्। कोकको बोतलको पहिलो sip। यद्यपि त्यहाँ नुहाउने बाहिर आउने र सुक्खा ताजा नरम तौलिया लिनु भन्दा राम्रो अरू केही छैन। त्यहाँ तौंलीहरू बाँच्न सक्छन, र त्यहाँ तौलिएहरू छन् जसले तपाईंलाई जीवित महसुस गराउन सक्छ। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि यो अतिशयोक्तिपूर्ण छ भने, त्यसोभए तपाईं ती मध्ये एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आफैंलाई यो विशेष तौलिया कल्पना प्रदान गर्नुभएको छैन।
तौलिया खेललाई मनपर्दो मनोहर तौलको साथ व्यवहार गर्नु भनेको तपाईलाई थाहा छ कि जीवन आधारभूत टेरी कपडा तौलियाको दायरा भन्दा पर छ। टेरी कपडाको लागि विनम्र नहुनुहोस्! जे होस्, जब तपाइँ टर्की कपास र माइक्रोफाइबर कपडाको फाइदा र हानिहरूको अध्ययन गर्न थाल्नुहुन्छ, विवरणहरू अझै स्पष्ट छन्। उदाहरण को लागी, तपाईं स्नान पछि microfiber स्नान तौलिए प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न। वास्तवमा, यसलाई भत्काऔं:
त्यसोभए कुनचाहिँ तपाईका लागि उत्तम हो? ठिक छ, यो स्वाद र लक्ष्य हो। तपाईं एक पटकमा विश्वलाई एक बाँसको तौंली बचत गर्न सक्नुहुन्छ, वा पैदल यात्राको लागि सजिलो-प्याक शोषक तौलिया प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, वा केवल लामो र धनी टर्की लक्जरी फाइबरको मजा लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ १० मनपर्नेहरू छन् तपाईले जाँच गर्नु पर्छ।
मलाई वाफल तौलिया मन पर्छ। यो ती मध्ये उच्च हो। होम कपडामा संलग्न जो कोहीले - ब्रूकलिन एक चीज हो भनेर जान्दछ, तर यसको सुपर नरम तौलिया तपाईले चाहानु भएको जस्तो हुन्छ। नरम र प्रकाश, टर्की कपासबाट बनेको, र सुपर द्रुत-सुकाइयो। वाफल पैटर्नको लागि धन्यवाद, उपस्थिति सफा र सफा छ, र शैली अद्वितीय छ। यसबाहेक, यदि तपाईंले कहिल्यै वफल तौलिया प्रयोग गर्नुभएको छ र लामो मोडिएको तारको कारण सम्भावित दौडहरू बारे चिन्तित हुनुहुन्छ भने, कृपया चिन्ता नलिनुहोस्। ब्रूकलिनको डिजाईन एकदम टिकाऊ देखिन्छ।
कहिलेकाँही तपाईले के गर्नु पर्छ नियमहरु पालना गर्नु पर्छ। त्यो हिउँको क्लासिक नुहाउने तौंलीले ल्याउँछ: सेतो, ठूलो, शोषक, र नरम। यहाँ कुनै गडबड छैन, तर स्नोले आधारभूत तौलिया डिजाइन अपनाएर यसलाई सुपर नरम कपडाको साथ सुधार गरी यसको सरलता अधिकतम गर्ने उपाय फेला पारेको छ जुन कपडा सफ्टनर वा कुनै खास रासायनिक एजेन्टहरू बिना धोइन्छ। वास्तवमा, धुने उत्तम तरिका सकेसम्म सरल छ। उच्च-अन्तमा कपासलाई बाँकी गरौं।
मेरो मतलब, यी राम्रा छन्, सही? यो एक पूर्ण प्रक्रिया हो, जसको मतलब तपाइँको ख्याल राख्नु पर्छ। (सन्दर्भको लागि, प्रत्येकसँग दुई स्नान तौंली, दुई तौंली, र दुई डिस्क्लोथहरू हुनुपर्दछ। यो औंठीको राम्रो नियम हो।) जसले ठूलो नुहाउने तौंलीहरू मन पराउँछ, ती चीजहरू नरक जत्तिकै बोझिला छन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो एक जैविक रोजाइ हो जुन उत्पादन प्रक्रियाबाट नैतिक आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ कम्पनीले काम गर्नेहरूलाई ज्याला दिन्छ। हो, यो उत्पादनहरूको महँगो सेट हो, तर तपाईं सुरूदेखि अन्तसम्म जान्न सक्नुहुन्छ कि बोल र शाखाले उत्पाद श्रृंखलामा उत्पादनहरू सुरक्षित बनाउँदछ। बोट सहित
मेरो अंशले यी तौंलीहरू काठको श्रेडरमा फाल्न चाहन्छ र के हुन्छ हेर्नुहोस्। अवश्य पनि, त्यो मेरो हिस्सा मात्र हो, किनकि मलाई थाहा छ कसरी काठको कित्ताले काम गर्दछ, तर त्यो मात्र प्यारासुट टावलले मलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गरेको कुरा भन्न सकिन्छ। तौलिया पनि टर्की कपासबाट बनेको छ, र यसले डिजाइन र प्रदर्शनमा धेरै विस्तृत महसुस गर्दछ, र लाइनहरूले यसलाई आधुनिक राख्छ। यो एक उच्च-अन्त तौलिया हो, तपाईं केहि खरीद गर्न सक्नुहुनेछ र लामो समयको लागि यो भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ।
मेरो मतलब ... [इशारा गर्ने तौलिया] यो सम्पूर्ण बेवकूफ दृश्य हो, होइन र? पूर्ण बदलावको लागि हेर्नेहरूको लागि, रिले होमबाट १ 17-टुक्रा नुहाउने ब्याग तपाईंको उत्तम विकल्प हो। यो दुई व्यक्तिको लागि स्टार्टर सेट हो जुन आफैंमा राम्रो उपचार गर्न चाहन्छः नुहाउने तौंली (स्पष्टतः जब तपाईं नुहाउने पछि ककुनमा बेर्नु चाहानुहुन्छ), नुहाउने तौंली, तौलिए र डिशक्लोथहरू। ओह, त्यहाँ नुहाउने म्याटहरू छन्। तपाई यसलाई हेर्न मन पराउनुहुन्छ। नुहाउने मैट बाहेक, सबै शून्य-मोती कपासबाट बनेको हुन्छ, जसको मतलब त्यहाँ कुनै टोक्ने वा बाधा हुनेछैन। यो रजाई बनाइएको छ कि यो फ्लफि रहन सक्छ (वा यो नजिक) कुनै कुरा तपाईं यसलाई धोए जति दिन।
आऊ, मेरो हिप्पी। हामी यसलाई एउटा नरम र दिगो बांस तौलियामा लपेटौं र हामी वरिपरिको खस्कँदो ग्रहको बारेमा सतर्क रहौं। प्रयोग गरिएको बाँस (तौलियाको सामग्रीको लगभग content०%) कपास भन्दा छिटो बढ्छ, तर आश्चर्यजनक नरम पनि? अब, यस सूचीमा त्यहाँ अन्य तौलिएहरू छन् जुन पागल शोषक वा सुपर प्लस तौलिए हुन सक्छ, तर यी तौलियामा नउठ्नुहोस्, तिनीहरू पर्याप्त नरम, शोषक र धेरै विलासी छन्। तपाईंसँग विश्वमा तपाईंको उपस्थिति घटाउन केहि गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको बढि फाइदा उनीहरूसँग छ। अब हामी सबैलाई केही तौलिए र पानी एकसाथ स save्कलन गरौं।
हामी सबैलाई थाहा छ, ब्रिट्नी मर्फी र चलचित्र "अपटाउन गर्ल्स" (अपटाउन गर्ल्स) ले २०० Egyptian मा इजिप्टियन कपासको अवधारणालाई जनताको ध्यान पुर्‍याएको थियो, तर कुनामा, यो कपडा १०० भन्दा बढी बर्षदेखि रहेको छ। ईतिहास। यो नरम कपडा नुहाउने तौंलीको रूपमा धेरै उपयुक्त छ - यो धेरै शोषक हो, तर यो टर्की कटन भन्दा ढिलो सुक्खा हुन्छ - यी दुई सामग्रीहरू नौसिखाहरू (र किफायती) को लागि उत्तम तरिका हो। व्हाइट क्लासिक द्वारा निर्मित, अमेजनमा उपलब्धता ढुवानी सजिलो बनाउँदछ।
हाम्रो परिवारमा नियम छ जुन मेरो पार्टनरलाई वेस्ट एल्ममा प्रवेश गर्न निषेध गर्दछ, किनकि हामी माथिल्लो मध्यम वर्गमा छैनौं र उसलाई कुनै संयमको भावना छैन। तर जब तपाईं यी तौंलीहरूलाई उचित मूल्यमा हेर्नुहुन्छ, उहाँसँग खडा हुन गाह्रो छ। हामी प्रायः चीजहरूले भरिपूर्ण घरको पासोमा पर्दछौं र त्यसमा हाम्रो आफ्नै शैली इन्फ्युज गर्ने कुनै तरिका भेट्टाउँदैनौं, तर यी जैविक कपास तौलियाले स्वादको एक निश्चित स्तर थप गर्दछन् र तपाईंको बाथरूमलाई अधिक व्यक्तिगत बनाउँदछन्। र ती दिगो रूपमा उत्पादन गरिन्छ। जब कोही भन्छन्: "धिक्कार, म यी उत्कृष्ट कला तौंलीहरू मन पराउँछु", यो तपाईको स्पष्ट टिप्पणी हो।
IKEA विकल्पहरूमा आँखा नदेखाउनुहोस्, मानौं तपाईले "Lafkafraafka" भनिने कुनै टेबलको स्वामित्व पाउनुभएको छैन। व्यक्तिहरू IKEA मा ठूलो धूमधाम बनाउन चाहान्छन्, तर किन युरोपेली खुद्रा विक्रेताहरू अवस्थित छन् र यति लामो अवधिमा सम्बन्ध कायम राख्नुको कारण तपाई कम मूल्यमा भारी सामानहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तसर्थ, साल्विकेन नुहाउने तौंलीहरू जम्मा १l वटा गुडिया कपालका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मेरो एक हडबडी टेरी कपडा हो। यी तौलिएहरू शोषक, भारी, र टिकाऊ हुन्। वाफल संरचना डिजाइनले तपाईलाई सोच्ने भन्दा तौलिया बढी सुन्दर देखिन्छ। के यो शुभ समाचार हो? यदी तपाई धेरै वर्ष सम्म यि नराम्रो केटाहरु लाई पक्रनुभयो भने, उनीहरुलाई प्रतिस्थापन गर्न सजिलो छ यदि अरू केहि छैन भने, कृपया पाहुनाहरूको लागि प्रयोग गर्नका लागि तिनीहरूलाई छुट्ट्याउनुहोस्।
नुहाउने तौंली सेट, नुहाउने तौलिया, अनुहार तौलिया, कपास तौलिया, रजाई कभर, रंगीन तौलिए,